त्रिदेशीय सिरिजः पाँच खेलमा नेपालकाे पाँच कीर्तिमान, अरू के के भए ? - DURBAR TIMES
HomeSportsत्रिदेशीय सिरिजः पाँच खेलमा नेपालकाे पाँच कीर्तिमान, अरू के के भए ?
त्रिदेशीय सिरिजः पाँच खेलमा नेपालकाे पाँच कीर्तिमान, अरू के के भए ?
काेराेना भाइरस महामारीका कारण नेपाली खेलकुद क्षेत्र निकै थला पर्याे । एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म कुनै प्रतियाेगिता आयाेजना भएनन् । झण्डै डेढ वर्षपछि नेपालमा नै क्रिकेटकाे त्रिदेशीय सिरिजकाे आयाेजना भयाे । नेपाली खेलाडीहरूका साथसाथै खेलप्रेमी सर्वसाधारणहरू निकै खुशी भए । नेपालसँग क्रिकेट खेल्न मलेसिया र नेदरल्याण्ड नेपाल आए । बैशाख ४ गतेदेखि ११ गतेसम्म प्रतियाेगिता सञ्चालन भयाे । जसमा नेपालले विभिन्न कीर्तिमानहरू कायम गर्दै उपाधि हात पार्याे ।
प्रतियाेगिताकाे पहिलाे खेलमा नेपालले नेदरल्याण्डलाइ ९ विकेटले पराजित गर्याे । त्रिवि अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेदरल्याण्डले दिएकाे १३७ रनकाे लक्ष्य नेपालले १५ औँ ओभरकाे अन्तिम बलमा पुरा गर्याे ।
प्रतियाेगिताकाे दाेस्राे खेलमा नेपालले मलेसियालाइ ९ विकेटले नै पराजित गर्याे । तेश्राे खेलमा भने नेदरल्याण्डसँग ३ विकेटले पराजित गर्याे । फेरी चाैथाे खेलमा मलेसियालाइ ६९ रनले पराजित गर्दै समूहकाे शीर्षस्थानमा रहँदै प्रतियाेगिताकाे फाइनलमा प्रवेश गर्याे । प्रतियाेगिताकाे फाइनलमा नेदरल्याण्डलाइ १४२ रनले पराजित गर्दै उपाधि उचाल्न सफल भयाे । ११ वर्षपछि नेपालले घरेलु मैदानमा उचालेकाे याे नै पहिलाे ट्रफि हाे ।
प्रतियाेगिताभरी नेपाली खेलाडीहरू चम्किरहे । सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक प्रहार गर्नेदेखि डेब्यु खेलसँगै लगातार ३ खेलमा अर्धशतक प्रहार गर्ने विश्वकीर्तिमान समेत नेपाली खेलाडीहरूले राख्न सफल भए ।
प्रतियाेगिताभरी पाँच खेलेकाे नेपालले पाँचवटै कीर्तिमान राखेकाे छ । जुन यसप्रकार छन्ः
१) पहिलाे ३ अन्तराष्ट्रिय टी ट्वान्टी क्रिकेटमा लगातार अर्धशतक प्रहार
नेपालका युवा ब्याट्स्म्यान कुशल भुर्तेल पहिलाे ३ अन्तराष्ट्रिय टी ट्वान्टी क्रिकेटमा लगातार अर्धशतक प्रहार गर्ने पहिलाे खेलाडी बन्न सफल भएका छन् । उनले प्रतियाेगितामा नेपालले खेलेकाे पहिलाे दाेस्राे र तेस्राे खेलमा लगातार अर्धशतक प्रहार गरे । उनले प्रतियाेगिताभरी पाँच खेल खेल्दै चार खेलमा अर्धशतक प्रहार गरे ।
२) सबैभन्दा कम उमेरमा अन्तराष्ट्रिय टी ट्वान्टी क्रिकेटमा अर्धशतक प्रहार
नेपालका अर्का युवा खेलाडी कुशल मल्ल सबैभन्दा कम उमेरमा अन्तराष्ट्रिय टी ट्वान्टी क्रिकेटमा अर्धशतक प्रहार गर्ने खेलाडी बनेका छन् । उनले प्रतियाेगिताकाे फाइनल खेलमा नेदरल्याण्डविरूद्ध अर्धशतक प्रहार गर्दै याे कीर्तिमान कायम गरेका हुन् । याे भन्दा अघि उक्त कीर्तिमान नेपालकै खेलाडी सन्दीप जाेराकाे नाममा रहेकाे थियाे । जाेराले १७ वर्ष ५२ दिनकाे उमेरमा अर्धशतक प्रहार गरेका थिएभने मल्लले १७ वर्ष ५० दिनकाे हुँदा याे कीर्तिमान कायम गरेका हुन् ।
३) नेपालकाे इतिहासमा अन्तराष्ट्रिय टी ट्वान्टीमा सबैभन्दा धेरै रन
नेपालकाे अन्तराष्ट्रिय टी ट्वान्टी क्रिकेटकाे इतिहासमा सबैभन्दा बढी रन २३८ रन हाे । जुन यही प्रतियाेगिताकाे फाइनल खेलमा नेदरल्याण्डविरूद्ध बनेकाे थियाे । याेभन्दा अघि १३ औँ सागमा भुटानविरूद्ध नेपालले २३६ रन बनाएकाे थियाे ।
४) एकै सिरिजमा चार अर्धशतक प्रहार गर्ने पहिलाे नेपाली खेलाडी
कुशल भुर्तेलले एकै सिरिजमा नेपालकाे तर्फबाट चार अर्धशतक बनाउने पहिलाे खेलाडीकाे रूपमा आफ्नाे नाम लेखाउन सफल भएका छन् ।उनले प्रतियाेगिताकाे पहिलाे, दाेस्राे, तेस्राे र पाँचाै खेलमा याे आँकडा पार गरेका हुन् ।
५) १०० टी ट्वान्टी क्रिकेट खेल्ने पहिलाे नेपाली खेलाडी
नेपालका बलर सन्दीप लामिछाने १०० टी ट्वान्टी खेल खेल्ने पहिलाे नेपाली खेलाडी बनेका छन् ।उनले प्रतियाेगिताकाे चाैथाे खेलमा मलेसियाविरूद्ध मैदानमा उत्रिँदै याे रेकर्ड कायम गरेका हुन्। १०० मध्ये उनले २५ वटा अन्तराष्ट्रिय टी ट्वान्टी क्रिकेट खेलेका छन् भने बाँकी ७५ वटा अन्य देश तथा नेपालमा समेत खेलेका छन् ।
पाँच कीर्तिमानबाहेक अरू के के भए प्रतियाेगितामा ?
कुनैपनि प्रतियाेगितामा सँधै नेपालकाे समस्याकाे रूपमा हेरिन्थ्याे नेपाली टीमकाे ब्याटिङ लाइन । तर याे प्रतियाेगिताकाे नेपालकाे ब्याटिङ आश्चर्यजनक तरिकाले सुधारिएकाे पाइयाे । प्रतियाेगितामा पाँच खेल खेल्दा नेपालले जम्मा १८ विकेट गुमायाे भने प्रतिद्वन्द्वीकाे ४१ विकेट लिन सफल भयाे । मलेसियासँग खेलेकाे दुवै खेलमा मलेसियालाइ अल आउट गर्याे भने नेदरल्याण्डलाइ फाइनलमा अल आउट गर्याे ।
प्रतियाेगितामा नेपालका कीर्तिमानी ब्याट्स्म्यान कुशल भुर्तेल सबैभन्दा बढी रन बनाउने खेलाडी बने । उनले पाँच खेल खेल्दै २७८ रन बनाए । उनी प्रतियाेगिताकै सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी बन्न सफल भए ।
प्रतियाेगितामा सबैभन्दा बढी विकेट पनि नेपाली खेलाडीले नै लिए । विकेट लिने खेलाडीकाे सूचीमा पहिलाे पाँचजनामा नेपालका ४ जना नेपाली बलर रहेका छन् । जसमध्ये पहिलाे नम्बरमा सन्दीप लामिछाने रहेका छन् । उनले प्रतियाेगिताभरी १३ विकेट लिए । दाेस्राेमा करण केसी ७ विकेट, तेस्राेमा करणसिंह ऐरी ५ विकेट र चाैथाेमा साेमपाल कामी ५ विकेट लिन सफल भए । अरू सबैले प्रतियाेगितामा समान पाँच खेल खेलेका थिए भने करणसिंह ऐरीले २ खेल खेलेका थिए ।
प्रतियाेगिताभरी एकमात्र शतक प्रहार भयाे । जुन नेदरल्याण्डका म्याक्स ओडेडले प्रहार गरेका थिए । उनले मलेसियाविरूद्धकाे पहिलाे खेलमा ७३ बलमा १५ चाैका र ६ छक्काकाे मद्दतले १३३ रन बनाएका थिए ।
प्रतियाेगितामा सबेभन्दा बढी छक्का प्रहार गर्ने खेलाडीहरूकाे सूचीमा पहिलाे पाँचजनामा सबै नेपाली खेलाडीहरू रहेका छन् । जसमा कुशल भुर्तेल १६ छक्कासहित पहिलाे स्थानमा छन् भने आरिफ सेख १० छक्कासहित दाेस्राे स्थानमा रहेका छन् । त्यस्तै कुशल मल्ल १० , दिपेन्द्रसिंह ऐरी ९ र ज्ञानेन्द्र मल्ल ८ छक्कासहित पाँचाैँ स्थानमा रहेका छन् ।
प्रतियाेगितामा सबैभन्दा बढी चाैका प्रहार गर्ने खेलाडीकाे सूचीमा पनि नेपालका कुशल भुर्तेल नै पहिलाे स्थानमा रहेका छन् । उनले प्रतियाेगिताभरी २४ वटा चाैका प्रहार गरे । दाेस्राे र तेस्राे स्थानमा नेदरल्याण्डका म्याक्स ओडेड र बेन कुपर क्रमशः २१ र २० चाैका रहेकाे छ । चाैथाे र पाँचाैँ स्थानमा नेपालका दिपेन्द्रसिंह ऐरी र आसिफ सेख क्रमशः १४ र १२ चाैकासहित रहेका छन् ।
यी सबै कीर्तिमानका पछाडी एक व्यक्ति रहेका छन्ः प्रशिक्षक डेभ वाटमेयर। अष्ट्रेलियन क्रिकेट खेलाडी वाटमेयर २०२१ काे जनवरीदेखि नेपालकाे प्रशिक्षक रहेका छन् । उनकाे प्रशिक्षकत्वमा नेपालले पहिलाे सिरिजमा नै उपाधि जित्न सफल भएकाे छ । उनले सन् १९९६ मा श्रीलंकाली क्रिकेट टीमलाइ प्रशिक्षककाे हैसियतमा विश्वकप जिताउँदा नेपालका अहिलेकाे कतिपय खेलाडीहरू जन्मिएकै थिएनन् । तीनै महान व्यक्तिले जिम्मा लिएर नेपाली क्रिकेटलाइ अर्काे लेबलमा लैजाने प्रयत्न र अठाेट लिएका छन् र उनी पहिलाे खुड्किलामा सफल पनि भएका छन् ।
Previous articleभारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए साढे ३ लाख नयाँ संक्रमित
Next articleरातै भयाे नेप्से , ६ वटा कम्पनीकाे मात्र मूल्य बढ्याे